Ciidamada Huwanta oo bilaabay Dhibaateenta Shacabka ku dhaqan Degmooyinka ay dhawaan qabsadeen. – idalenews.com
Ciidamada Huwanta oo bilaabay Dhibaateenta Shacabka ku dhaqan Degmooyinka ay dhawaan qabsadeen.
Ciidamada Dowlada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa lagu eedeeyay in ay bilaabeen dhibaatooyin ay u geesanayaan Shacabka ku dhaqan Degmooyin iyo Deegaanado ay dhawaan kala wareegeen Xarakada Al-Shabaab.
Waxgaradka Degmada Qoryooley ayaa ka cabanaya Ciidamada Dowlada iyo kuwa AMISOM ee dhawaan la wareegay Degmadaasi ,kuwaa ay ku eedeeyeen in ay bilaabeen dhibaateenta shacabka ku harsan Qoryooley.
Ugaas Mukhtaar Ugaas Maxamed Ugaas Cumar oo kamid ah Odayaasha ku dhaqan Degmada Qoryooley ayaa ku eedeeyay Ciidamada Dowlada iyo kuwa AMISOM in dhibaatooyin xoogan ku hayaan shacabka ku dhaqan Degmada Qoryooley.
Waxa uu sheegay Ugaaska Dhibaatada lagau hayo Shacabka Qoryooley in ay tahay arin aan laga aamusi Karin ,waxa uuna dowlada Soomaaliya ka codsaday inay soo fara geliso dhibaatada lagu hayo Shacabka Reer Qoryooley.
Ciidamada Dowlada iyo kuwa AMISOM ayaa lagu eedeeyay in ay bililiqeesteen goobaha ganacsi ee ku yaala Degmada Qoyoole ,waxaa kale oo lagu eedeeyay ciidamada jir dil iyo dhibaatooyin kale ay u geesanayaan dadka rayidka ah.
Yuusuf Garraad oo qormo murugo leh ka qoray dhibaatada Baydhabo Janaay!
Shirka Bakiin oo Madaxweyne 3 gobol u doortay Maxamed Xaaji Cabdinuur (Madeer) oo Shariif Xasan walaalo yihiin.